शल्यक्रिया गरेर बच्चा जन्माएको कति समयपछि अर्को गर्भधारण गर्न उपयुक्त हुन्छ? :: स्वास्थ्यखबर :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
शल्यक्रिया गरेर बच्चा जन्माएको कति समयपछि अर्को गर्भधारण गर्न उपयुक्त हुन्छ?
स्वास्थ्यखबर बुधबार, वैशाख २१, २०७९, १९:५६:०७
सिजेरियन प्रसूति (शल्यक्रिया गरेर बच्चा जन्माउने) गराउनेको संख्या पछिल्लो समय बढ्दै गइरहेको छ। सामान्य प्रसूतिभन्दा शल्यक्रियामा नै बढी जोड दिने स्वास्थ्य संस्थामा धेरैजसो निजी अस्पताल नै छन्। महिलाहरुमा बढ्दो मोटोपना, मधुमेह, उच्च रक्तचाप र उमेर ढल्किएपछि हुने गर्भधारणलगायतका कारण आजकाल शल्यक्रियामार्फत् बच्चा जन्माउने गरिन्छ। सिजेरियन एक शल्यक्रिया हो, जो शिशुको जन्मका क्रममा आउने जटीलताका कारण गरिन्छ। प्राकृतिक रुपमा बच्चा जन्माउँदा आमा र शिशुको ज्यान जाने खतरा भएको अवस्थामा यस्तो शल्यक्रिया गरिन्छ। सिजेरियन डेलिभरी विभिन्न प्रकारका हुन्छन्, जसअनुसार शल्यक्रियाको १० हप्तासम्म आमाले आफ्नो ख्याल राख्नुपर्छ।
सी–सेक्सन अर्थात् सिजेरियन डेलिभरीपछि कुन–कुन कुरामा ध्यान दिनुपर्छ र कति समयपछि अर्को गर्भधारण गर्नसकिन्छ भन्नेबारेमा महिलाहरुलाई थाहा हुनुपर्छ। महिलाहरुले दोस्रो सन्तानको योजना कहिले गर्ने र आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल कसरी गर्ने?
१. अर्को गर्भधारणका लागि ब्रेक लिनुपर्छ
यदि सिजेरियन प्रसूति भएको छ भने अर्को गर्भधारणका लागि कम्तीमा पनि २ वर्ष ब्रेक लिनुपर्छ। ब्रेक लिएर अर्को सन्तानको योजना गरे अर्को गर्भधारण प्राकृतिक रुपमा हुने सम्भावना बढी हुन्छ। अनुसन्धानअनुसार यदि २ वर्षभित्र अर्को गर्भधारण भयो भने त्यस्तो बेला गर्भाशय फाट्ने खतरा बढी हुन्छ। यसले समस्या सिर्जना हुने भएकाले दुई गर्भावस्थाको बीच यथेष्ठ समयअन्तर पार्नुपर्छ।
२. यौनसम्पर्कका क्रममा गर्भनिरोधक साधन प्रयोग गर्नुपर्छ
सिजेरियन डेलिभरी भएको हो भने त्यसपछि यौनसम्पर्क गर्दा विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ। अर्को बच्चाको अन्तर कम्तीमा पनि १८ महिनाको हुनुपर्छ।
३. आइरन र क्याल्सियम खानुपर्छ
सिजेरियन डेलिभरी हुँदा खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। शरीरमा आवश्यक पोषक तत्वको कमी हुनसक्ने भएकाले त्यसलाई पूरा गर्नुपर्छ। डाइटमा ६ महिनासम्म आइरन र क्याल्सियम सामेल गर्नुपर्छ। प्रोटिन पनि लिनुपर्छ।
४. चिकित्सकको सल्लाहबमोजिम पेटको अभ्यास गर्नुपर्छ
सामान्यतः महिलाहरु सुत्केरी भएको ६ देखि ८ सातापछि शरीरको आकार नबिग्रियोस् भनेर शारीरिक अभ्यास सुरु गर्छन्। तर सिजेरियन डेलिभरीपछि चिकित्सकको सल्लाह लिएरमात्र एब्डोमिनल एक्सरसाइज गर्नुपर्छ। चिकित्सकले महिलाको शारीरिक स्थिति र मांसपेशीको लचिलोपन परीक्षण गरेपछिमात्र अभ्यास सुरु गर्ने सल्लाह दिन्छन्।
५. भारी सामान उठानबाट बँच्नुपर्छ
सिजेरियन डेलिभरीपछि गर्‍हुंगो सामान उठाउनबाट बँच्नुपर्छ कम्तीमा पनि ६ महिनासम्म यस्तो गर्नुहुन्न।
६. व्यक्तिगत सरसफाईमा ध्यान दिनुपर्छ
सिजेरियन डेलिभरीपछि आफ्नो सरसफाईमा ध्यान दिनुपर्छ। प्युबिक हेयर सफा राख्नुपर्छ। यसो गर्नाले यौनांगमा पसिना आउँदैन र संक्रमणको खतराबाट बँच्न सकिन्छ।